ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးကြရင်တိုးတက်မည့် အပိုင်းတွေက တကယ်တန်းတော့ အများကြီးပါဘဲ ဖြည့်ပီးတွေးပေးပါလို့ ဆိုပါရစေခင်ဗျ
သိပ်ကြီးကောင်းလွန်းနေလို့ သာလွန်းနေလို့ ဒီဘက်ကို နဲနဲ့ငဲ့ပေးပါအုန်းတဲ့ Dev တွေ ကြိုးစားပေးကြရင် ဇော်ဂျီ တိုးတက်မလာနိုင်ဖူးလား ဝိုင်းပြောပေးကြရင် ကမ္ဘာက လက္ခံလာမယ်ပေါ့ ...
ဆိုတာလေးကို အခြေအနေတစ်ခုကနေ တစ်ခုထင်ထင်ရှားရှား ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်...
နေလာတဲ့ အိမ် ဘယ်အချိန်မှာ ပြောင်းမလဲ..
ကျွန်တော့မှာ ဘာများအပြစ်ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ယူနီကုတ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရေး လှုံဆော်လို့ နဂိုလို စာတွေ အတည့် မမြင်ရတော့ စိတ်ဆိုးကြနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ နားလည်မှုလွဲ အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေ တိုက်ပွဲတွေကလဲ ကြည့်လိုက်ရင် အကြမ်းကြီးတွေပါဘဲ..
Unicode ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ယူနီကုဒ်နဲ့ပါတ်သတ်ပီး သိပ်အများကြီးလဲ မရေးချင်ပါဘူး...
iOS 10 မှာ မြန်မာစာမှန်လား ?
ဟိုတနေ့က Facebook ထဲကအသိတစ်ယောက် ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ်ကို windows နဲ့ Mac OS အကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့ post လေးကို Like လိုက်တော့ ကိုယ်တွေလဲပြောင်းလဲချိန်တန်ပီလို့ အတွေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်
Why Unicode font only use in our page
Page မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးလာတာ နှစ်ပေါက်ခဲ့ပါပီ စာဖတ်သူများ ...
သဝေထိုး နေရာလွဲတာလေး အန်ဒွိုက်ဖုန်းသုံးသူဆို ကြုံဖူးကြမှာပါ ..
iOS တွေမှာ uni keyboard ထည့်သွင်းပုံလေးပါ
Google မှာ မြန်မာစာ မမှန်ဘူး ဖြစ်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ??
iOS Keyboard Software tools Tutorial ဆောင်းပါး